धान काटने यसरीः
धान काटदै भक्तपुरको एभरेष्ट इंगलिश स्कुलका विद्यार्थी । सो विद्यालयका कक्षा ४ का ९८ जना विद्यार्थी धान काटने कार्यमा सहभागी भएका थिए । स्कुलकी शिक्षिका एवं धान कार्यक्रमकी संयोजक प्रकृति न्यापानेले खेतमा लानु अघि उनीहरूलाई धान काटने तरिका बारे बताएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सवै जानकारी दिएपछि
विष्णु सरको बिदाइः
मंगलबार पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय (चावहिल) ले पूर्व प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद अधिकारीको विदाई तथा दशै, तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका झलक तस्विर मिलन बस्नेत /अमरवाणी
सिडियो आफैं छड्केमा
जाजरकोट सदरमुकामबाट छुट्ने यातायातका साधनहरुले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो आएपछि बसपार्कमा रहेको टिकट वितरण कक्ष र यातायातका साधनहरु जाँच गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेत ।
पाटनमा कुमारी पूजा(फोटो फिचर)
इन्द्र जात्राको चौथो दिन ललितपुरको ऐतिहासिक सहर पाटनमा कुमारीको पूजाअर्चना गर्दै स्थानीयवासी । शुक्रबार हनुमानढोकामा ३६ हात लामो यः सिं (लिंगो) ठड्याएर आधिकारिक रूपमा इन्द्रजात्रा सुरू भएसँगै कुमारी पूजा गर्ने प्रचलन छ । नेवार समुदायको परम्परामा कुमारी पूजा गर्नाले सुख–शान्ति र समृद्धि प्राप्त
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । अमरवाणी अनलाइन डट कमले स्थापनाको एक वर्ष पुरा गरेको छ । अमरवाणी मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित अनलाइनको वार्षिकोत्सवका अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल र ‘बुद्ध वाज वर्न इन नेपाल’ भन्ने सन्देश लिएर ९० भन्दा वढी देश पुगेका चन्द्रदीप राईलाई सम्मान गरियो । कार्यक्रमका प्रमुख
तस्वीरः रमेश दवाडी/अमरवाणी
सोमबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित गौरा पर्वमा रम्दै सुदूर तथा मध्य पश्चिमवासी । भाद्र शुक्ल पक्ष पञ्चमीबाट सुरू हुने गौरा पर्व ५ दिनसम्म मनाउने गरिन्छ । तस्विरः अमरवाणी डटकम
काठमाडौं । साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षा बन्धन एवम् जनैपूर्णिमा आइतबार मनाइएको छ । चूडाकर्म गरेका तागाधारीले मन्त्रणा गरिएको नयाँ जनै फर्ने र अन्यले नाडीमा रक्षावन्धन लगाउने यस दिनको विशेष सास्कृतिक एवम् धार्मिक महत्व छ । तराई क्षेत्रमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ‘राखी’ बाँधेर यो पर्व मनाउने
चक्रपथबाट आईरहेको बा १ ख ७४४९ बस र बा ११ च २५०६ कार चावहिलमा एक आपसमा ठोक्किए । तर, कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ ।
साउनको अन्तिम सोमबार पशुपतिमा दर्शनार्थीको घुँइचो
काठमाडौं । हिन्दु परम्परा अनुसार हरेक साउने सोमबारको महत्व छ । यो दिन ब्रतालुहरू भगवान शिवको पूजा अर्चन गर्ने गर्छन् । तर, पहिलो र अन्तिम सोमबारको महत्व अझै वढी भएको ब्रतालुहरू बताउँछन् । यस वर्षको अन्तिम साउने सोमबारको दर्शन गर्न पुशपति पुगेका ब्रतालु जनकपुरका रामकरण शाह भगवान शिवले सारा दुःख पार गर्ने
कलम चलाउनुभन्दा गाह्रोः
योगी नरहरिनाथको समाधीस्थलमा शनिबार लेखक तथा स्तम्भकार सौरभ वृक्षारोपणका लागि खाल्डो खन्दै । तस्वीरःअमरवाणी
आईतबार साँझ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा स्पेनिस पर्यटकहरु । सनातन धर्ममा उनीहरुको गहिरो आस्था र रूची रहेछ । उनीहरु घुमघाम सकेर सन्ध्याकालीन आरतीको पखाईमा थिए ।
बजार लैजाने तयारीः
काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–१२ ठूलागाँउका किसानको बगैचाबाट आँप टिपेर काठमाडौं लैजाने तयारीमा । आँप व्यवस्थापनका लागि भारतको बिहारबाट आएका श्रमिक र व्यापारीले बगैचा नै ठेक्का लिने गर्छन् । तस्वीर/अमरवाणी
साउनको पहिलो सोमबार शिवालयमा दर्शनार्थीको भिड (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । आज साउनको पहिलो सोमबार। प्रायः हिन्दु महिला साउने सोमबारमा ब्रत बस्दछन् । अबिवाहित महिला सुयोग्य पतिको कामना गर्दै ब्रत लिने गर्छन् भने भने बिवाहित महिलाहले श्रीमान्को दीर्घ जीवनका साथै सौभाग्यको कामना गर्दै ब्रत लिने परम्परा छ । साउनमा हिन्दु महिलाले हातमा मेहेन्दी, रातो, पहेंलो र हरियो वस्त्र
काठमाडौँको मैतिदेवीस्थित श्रृङ्गार पसलमा हरियो चुरा लगाउँदै एक महिला । साउन महिना सुरु भएसँगै हरियो, पहेंलो र रातो, चुरा, कुर्ता सलवा, साडी र मेहेन्दीको विक्री बढेको छ । साउनमा हरियो, पहेंलो र रातो चुरापोते एवम् कपडा लगाउनुको आफ्नै अर्थ छ । हरियोलाई प्रेम र वातावरणको, रातोलाई सौभाग्यको र पहेंलोलाई
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०५ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आदिकवि प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साहित्य साधना मार्फत नेपाली भाषा–साहित्यको विस्तार र विकासमा साधकहरुलाई सफलता मिलोस्, हार्दिक शुभकामना । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ट्वीटरबाट
भानुको सम्झनामा कविगोष्ठी
२०५ औं भानुजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंको बानेश्वर क्याम्पसमा सोमबार आयोजित कविगोष्ठीमा बायाँबाट क्रमशः मोदनाथ प्रश्रित, बासुदेव त्रिपाठी, तुलसी दिवस र राजेन्द्र सुवेदी । कार्यक्रमा उपस्थित कवि तथा साहित्यकारहरूले भानुको स्मरण गर्दै कविता वाचन गरेका थिए । भानुजयन्ती असार २९ गते परे पनि सप्ताहगत
बौद्ध–चावहिल हिलो र धुलो
काठमाडौंको हिलाम्य बौद्ध क्षेत्र । बौद्धको हिलोले चावहिलमा धुलो वढाएको छ । दुबै क्षेत्रका वासिन्दा हिलो र धुलोको सिकार बनेका छन तैपनि सडक पक्की गर्न तम्सिएको छैन सरकार । तस्वीरःअभिषेक
खुमलटारमा छुपुमा छुपु (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । पन्ध्रौ राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान र बाली विज्ञान महाशाखाको संयुक्त आयोजनामा असार १५ शुक्रबार गरिएको धान रोपाईँ कार्यक्रमको उद्घाटन नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. वैद्यनाथ महतोले गरे । उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण र यन्त्रिकरणमा
प्राचीन किरातेश्वर मूर्ति तोडफोड
किरातकालीन राजा यलम्बरको पालामा बनेको पशुपति क्षेत्रमा अवस्थित प्राचीन किरातेश्वर मूर्ति तोडफोड भएको छ । मूर्ति आफूलाई माता बताउने दुई जनाले तोडफोड गरेको स्थानीयबासीले अभिषेक कर्माचार्यले जानकारी दिए । मूर्तिको पछिल्लो भाग चोईटिएको छ । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
नगरकोटीको नजर !
काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सञ्चालित २२ औँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीमा शुक्रबार पुस्तकको अवलोकन गर्दै आख्यानकार कुमार नगरकोटी । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
पुस्तक पढौँ !
काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सञ्चालित २२ औँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीमा शुक्रबार विद्यार्थीहरू पुस्तकको अवलोकन गर्दै । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
काठमाडौँको मध्यबानेश्वरमा बेच्न राखिएका ब्राजिल, जर्मन, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, फ्रान्स लगायत फुटबल टिमका जर्सी । फिफा विश्वकप फुटबल–२०१८ जेठ ३१ गतेबाट रसियामा सुरु हुँदै छ । समर्थकहरूले आफूले रोजेको देशले विश्वकप जितोस् भनि हौसला बढाउन जर्सी लगाउने गर्छन् । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
किन्ने हो तरकारी ?
कालिमाटी तरकारी बजारमा ग्राहकको चहलपहल । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण गरिंदै (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । ‘गोरखा भूकम्प–२०७२’ ले क्षतिग्रस्त बसन्तपुर क्षेत्रको नौ तले दरबार पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पाँच वर्षभित्रमा पुनर्निर्माण सक्ने गरी पुननिर्माण कार्य जारी छ । दरबारमा फलामे डण्डीको खट बाँधी चर्किएको गाह्रोलाई सबलीकरण गर्ने र माथिल्लो
आहारा खोज्दै काग
काठमाडौँ चाबहिलस्थि चारूमति विहारमा बुधबार आहारा खोज्दै काग । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
पाँच तस्बिरमा हेर्नुहोस् मनमोहक शिरीषको फूल
काठमाडौँको मित्रपार्कमा फूलेको शिरीषको फूल । यो वसन्त ऋतुमा फूल्ने गर्दछ । वृक्षभरी पात झाङ्गिने र गर्मीयाममा निकै भरपर्दो छहारी शिरीषले दिन्छ । यसको पात मुलायम र उन्यूका पातझैँ असङ्ख्य स–साना पातहरूको संयुक्त पुञ्जमा सजिएको हुन्छ । फूल भने रेशमका अनगिन्ती धागोका पुञ्जहरू मिलेर हाँगाभरी
सेतोपुलस्थित धोबीखोला करिडोर निर्माण गर्दै कामदार । उपत्यकाका सडकलाई व्यवस्थित बनाउनेक्रममा सरकारले निमार्ण कार्यलाईलाई तीव्रता दिएको छ । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी